Home Wararka Gudiga D. Federaal oo ka gaabsaday inay jadwalkii 5naad ee fashilka soo...
Gudiga D. Federaal oo ka gaabsaday inay jadwalkii 5naad ee fashilka soo saaraan
Iyada oo afartii jadwal oo ay horay u soo saareen gudiga doorashada heer federaal ay dhamantood ku dhamadaan fashil iyo fulin la’aan, ayaa hadana RW Rooble waxa uu ku qasbayaa gudigaas in ay soo saaraan jadwal kale oo been abuur ah si uu u sheegto in dorashadii bilaabatay lacagna loogu soo daayo.
Hadaba shir looga hadlayay bilaabidda xaraynta ergada doorashada Golaha Shacabka ayaa waxaa Muqdisho ku yeeshay Guddiyada Doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer Dowlad Gobolleed. Shirka oo socday muddo sadex cisho ah ayaa waxaa ka qeybgalay Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka Heer Federaal, kaasi oo isugu yeeray Shirgudoonada Gudi hoosaadka Doorashooyinka Somaliland, Galmudug, Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Banaadiriga iyo Guddiga Xalinta Khilaafaadka.
Ujeeddada shirka ayaa ah bilaabidda xaraynta ergada doorashada Golaha Shacabka iyo Qodobo kale oo muhiim ah. Gudoomiyaha Guddiga Doorashada Heer federaal Maxamed Xasan Cirro ayaa Guddiyada ugu baaqay inay dardar geliyaan howlaha doorashooyinka dalka si loo dhameystiro howlaha ka harsan, isla markaana dalka ay uga dhacdo doorasho la isla ogol yahay.
Ma muuqato sida ay ku suuragaleyso in gudigaas doorasho qabtaan iyada oo aan xal loo helin khilaafaadka hada taagan.